I-LG Q8 (2018): Ukucaciswa, ixabiso kunye nokumiliselwa kwinqanaba eliphakathi | I-Androidsis
Malunga neenyanga ezimbini ezidlulileyo i-LG ivelise i-LG Q7 (2018), imodeli yayo entsha ekumgangatho ophakathi. Ngoku, ifemi isinika ilungu elitsha lolu sapho. Imalunga ne-LG Q8 (2018), ifowuni enezinto ezininzi ezifanayo nemodeli eboniswe kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Aba babini beza ukomeleza ibanga eliphakathi lenkampani yaseMzantsi Korea.
Le LG Q8 (2018) imele imiba ethile, enje ngescreen sayo esikhulu, kunye nokuxhathisa kwamanzi. Ke sijamelene nemodeli enikezela okuninzi ngaphakathi kuluhlu oluphakathi lwe-LG. Kwaye sele siyazazi iinkcukacha zayo ngokupheleleyo.
Njengoko kuqhelekile kwiifowuni zorhwebo, Imodeli ayidanisi xa isiza kuma-specs. Iyahambelana ngokupheleleyo kule nkalo, kodwa ihlala ilixabiso elenza iingxaki ngakumbi kwaye ayivumeli iifowuni ukuba zithengise kakhulu.
1 Ukucaciswa kwe-LG Q8 (2018)
Ukucaciswa kwe-LG Q8 (2018)
Kwiimodeli zangaphambili sibonile ukutsiba kumgangatho kolu luhlu luphakathi kwenkampani yaseKorea. Into ebonwa kwakhona kule LG Q8 (2018). Ukongeza, sinokubona ukutsiba okubonakalayo kubungakanani befowuni, kuba kule modeli sidlula ngobukhulu i-intshi ezi-6. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Iscreen: 6,2 intshi nge-FullHD + resolution (2160 x 1080) kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 450
Ukugcinwa kwangaphakathi: i-64 GB (iyandiswa nge-microSD)
Ikhamera esemva: MP eyi-16 ene-LED kunye ne-PDAF
Inkqubo yokusebenza: I-Android 8.1 Oreo
Imilinganiselo: 160.1 x 77.7 x 8.4 mm
Ubunzima: 172 gram
Ukunxibelelana: Uhlobo lwe-C C, i-WiFi ac, isivamvo somnwe esingasemva
Abanye: Ukuxhathisa kwamanzi nge-IP68, i-DAC, i-MIL-STD. 810G, i-DTS: X
Ngokwendlela yoyilo, le LG Q8 (2018) iveza izinto ezimbalwa ezimangazayo. Ifowuni ivula isikrini esinezakhelo ezincinci kunye nomyinge we-18: 9, ke ngokulandela emanyathelweni eefowuni ezininzi athe umenzi wazisa ngazo kwintengiso. Uhlobo lwentengiso lwalungowokuqala ukwamkela olu hlobo lomboniso. Imile ngobukhulu bayo obukhulu, ine-intshi ezi-6,2 kunye nesisombululo esihle. Isikrini esifanelekileyo sokusetyenziswa komxholo.
Apho kunokuphoxeka khona okusemandleni. Ayinayo eyona processor ilungileyo phaya kwiQualcomm, ukubheja kwi-Snapdragon 450. Kwaye ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, sifumana indibaniselwano eyahlukileyo ye-4/64 GB. Ibhetri akufuneki ibe yingxaki kule LG Q8 (2018), nge-3.300 mAh yayo, eya kuthi inike ukuzimela. Ukongeza, sinokutshaja ngokukhawuleza okufumanekayo kwimodeli. Umsebenzi oqinisekileyo wokuxabiswa ngokuqinisekileyo.
Sifumana ikhamera enye, zombini ngaphambili nangasemva kwemodeli. Kodwa ayisiyonto imbi leyo, kuba kubonakala ngathi zimbini iikhamera zemodeli ngaphezulu kokwenza umsebenzi wabo. Ikhamera yangaphambili imele i-angle yayo ebanzi ye-100. Ngelixa umva wemodeli une-Flash ye-LED kunye ne-autofocus, ekufuneka isincede sithathe iifoto ezilungileyo ngayo.
Phakathi kwezinye zeenkcukacha zayo, Iqaqambisa ngakumbi isatifikethi se-IP68 sokuba le modeli inayo. Enkosi ngayo siya kuba nakho ukuhambisa ifowuni. Inketho elungileyo kubasebenzisi abafuna ukuyisebenzisa kuhambo lwabo, okanye xa kunokwenzeka iwele emanzini ngengozi. Sikwanayo inzwa yeminwe yeminwe ngasemva kuluhlu oluphakathi.
Siyabona ukuba i-LG Q8 (2018) iyimodeli enomdla kakhulu kwinqanaba eliphakathi. Nangona, ixabiso layo linokuba yinto ethintela ukuba ungaphumeleli kwintengiso. Okwangoku Le modeli iyafumaneka eMzantsi Korea, apho ifumaneka ngemibala emibini (luhlaza okwesibhakabhaka nomnyama).
Akukho kwaziwa ngokuqaliswa kwayo kwiimarike ezintsha okwangoku. I-brand ayithethanga nto, ke kuyakufuneka silinde ukwazi okungakumbi malunga noku. Kwaye asinalo ixabiso lokugqibela eYurophu. EMzantsi Korea kubekiwe kuthengiswa ngexabiso elimalunga nee-euro ezingama-415 ngokutshintshiselana. Nangona kunokuba kubiza kakhulu ukufika kwilizwekazi elidala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG Q8 (2018): Uluhlu olutsha olungamanzi ngaphakathi